BUDDHIST TERMS' Dictionary: MORAL OBLIGATION - စာရိတ္တသီလ
MORAL OBLIGATION - စာရိတ္တသီလ
MORAL OBLIGATION Cᾱrittasῑla
စာရိတ္တသီလ - စာရိတ္တသီလ၊ ကျင့်ထိုက်သောသီလ၊ ကျင့်ဝတ်သီလ။
ပြည့်အောင်ဖြည့်ကျင့်အပ်သော သီလမျိုးသည် စာရိတ္တသီလမည်၏။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၌ အသက်သိက္ခာ ဂုဏ်ဝါကြီးသူတို့အား ရှိခိုးမှု ခရီးဦးကြိုမှု လက်အုပ်ချီမှု အရိုအသေပြုမှု ၀တ်ကြီးဝတ်ငယ်ပြုမှုအစရှိသော ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များရှိ၏။ ထိုကျင့်ဝတ်များကို ပြည့်အောင် ဖြည့်ကျင့်ယူရသောကြောင့် စာရိတ္တသီလဟု ခေါ်သည်။
Virtuous conduct; virtue as keeping
By moral obligations is meant certain obligations that must be fulfilled. In Buddhist ethics certain moral obligations are incumbent on one such as: paying respects, welcoming, making obeisance, showing reverence and attending on one’s elders who may be senior in age or in status, and one has to fulfill them. Such fulfillment is called virtuous conduct, caritta sῑla.